Maka: i-imeyili isilinganiso esivulekile | Martech Zone
Maka: i-imeyili isilinganiso esivulekile
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 7, i-2017 UTerri Mock
Yize intwasahlobo isanda kuvela, abathengi balwela ukuqala ngamaphrojekthi abo wokuthuthukisa amakhaya kanye nokuhlanza, kungasaphathwa ukuthenga izigqoko ezintsha zasentwasahlobo nokubuyela esimeni ngemuva kwezinyanga zobusika busebusika. Ukulangazelela kwabantu ukungena emicimbini eyahlukahlukene yasentwasahlobo kungumshayeli omkhulu wezikhangiso ezinentwasahlobo, amakhasi okufika neminye imikhankaso yokukhangisa esiyibona ekuqaleni kukaFebhuwari. Kungenzeka kusakhona iqhwa
5 Izeluleko Zokusebenzisa i-imeyili Ukwandisa Ukuvula Nokuchofoza
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 3, i-2015 NgoLwesithathu, Februwari 4, 2015 Douglas Karr
Akutholi kube lula kakhulu kunale infographic evela ku-ContentLEAD. Amathemba agcwaliswa nge-imeyili ngenxa yezindleko eziphansi ngokuhola ngakunye nezinga eliphezulu lokuguqulwa. Kepha lokho kuchaza inkinga enkulu… i-imeyili yakho ilahlekile ebhokisini lokungenayo phakathi kwamakhulu noma izinkulungwane zeminye imiyalezo yokuthengisa. Yini ongayenza ukuze uhlukanise ukuxhumana kwakho kwe-imeyili nezixuku? Nazi izinto ezi-5 ngaphakathi kwesimo somlayezo we-imeyili kanye nomthelela